Izifundo zesiNgisi - Isikole esiPhakathi seLimi, eCambridge
Isikole Sezilimi Eziyinhloko sinikeza IsiNgisi Esijwayelekile, IsiNgisi Esinzulu, Isikhathi Sengxenye Nesikhathi Sokuhlola. Ulwazi ngalunye lwalezi zifundo lungatholakala ngokusebenzisa imenyu ngakwesokudla.
Siyakwamukela abafundi unyaka wonke futhi sivale kuphela isikhathi sikaKhisimusi.
Inkambo yakho kanye Nesikhathi sakho
Inkambo yakho ingancika ezingeni lakho, ngakho-ke sikunikeza ukuhlolwa kokubeka lapho ufika. Ungathatha futhi Ukuhlolwa kwe-Cambridge English, okuzokutshela ukuthi yikuphi ukuhlolwa ongakulungela. Lokhu kungumhlahlandlela, ngakho-ke sizokwazisa ngenkathi uthatha inkambo.
Izifundo zethu zesikhathi esigcwele zibizwa IsiNgisi Jikelele (I-15 yamahora amahora ngesonto) noma IsiNgisi esinamandla (I-21 yamahora amahora ngesonto). Izifundo zihamba njalo ekuseni kusukela ngoMsombuluko kuya kuLwesihlanu, i-09: 30 kuze kufike i-13: i-00 enekhefu e-11: 00. Uma ukhetha i-Intensive English kukhona namakilasi ngoLwesibili, ngoLwesithathu nangoLwesine ntambama phakathi kwe-14: 00-16: 00.
Siphinde sinikeze inkambo ehlukile yesikhathi sesikhathi sokusebenza: nganoma yisiphi isikhathi sonyaka ungakwazi ukutadisha kwethu Ngenkathi yesonto ntambama, okuyingxenye yantambama yesiNgisi Esinzulu, njengoba ngenhla.
Kukhona imisebenzi yentambama noma ntambama yomphakathi kunoma yibaphi abafundi bethu, enikeza umkhuba owengeziwe ngesiNgisi esikhulume.
Ungaqala nganoma yikuphi uMsombuluko (ngaphandle kwamaholide omphakathi) okungenani ngesonto elilodwa. Abafundi abaningi bafunda amasonto e-4-12. Abanye abafundi bafundela unyaka owodwa. Singakukwazisa ngobude beklasi okudingekayo ukuze ufinyelele imigomo ethile.
Usayizi wesigaba esiphezulu ngu-6. Uma ufika esikoleni uzokwenza i-Placement Test ukuhlola izinga lakho. Ngemuva kwalokho uzobekwa ekilasini ngokwezinga lakho lohlelo lolimi, ikhono lokukhuluma nezinhloso zakho. Usebenzisa izincwadi zezifundo ezahlukahlukene uzofunda isiNgisi ngezindawo ezahlukahlukene zezihloko ngokugcizelela ukuxhumana okukhulunywayo. Lokhu kubandakanya ukusebenza ngababili, izingxoxo nokudlala indima. Uzobuye ube nethuba lokwelula isilulumagama sakho futhi uhlanganise ulwazi lwakho lohlelo lolimi.
Isifundo se-General English ngamahora angu-15 ngesonto njalo ekuseni kusukela ku-09: 30 futhi iqedela ku-13: 00 nge-...	Funda kabanzi
Abafundi abafisa ukuchitha isikhathi esiningi bafunda isiNgisi bangakwazi ukubhalisa izifundo ze-English ezijulile (amahora angu-21 ngesonto)....	Funda kabanzi
I-AFTERNOON COURSE Ungaqala inkambo yakho yase-Afternoon nganoma yisiphi uLwesibili ngemuva kokuthatha uhlolo lokubeka. Ntambama...	Funda kabanzi
Othisha bakho bazokweluleka ngokuhlolwa okuhle kakhulu. Ungathatha futhi isivivinyo sesiNgisi saseCambridge. ukuze...	Funda kabanzi